Advertisings Archives - YCC
Mandalay ICT Park
Call Us! +959 794 069 355
သင်တန်းကျောင်း မိတ်ဆက်ပွဲများနှင့် သင်တန်းဆင်းပွဲများအတွက် အခန်းငှားရမ်းနိုင်ခြင်း။
By Mandalay ICT | March 28, 2018 | 0
လူကြီးမင်းတို့၏ သင်တန်းကျောင်းများမှ သင်တန်းမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားများနှင့် သင်တန်းဆင်းပွဲများအတွက် Mandalay ICT Park တွင် ဈေးနှုန်းချိုချိုသာသာဖြင့် အဆင်ပြေစွာကျင်းပပြုလုပ်နိူင်ကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက 02-69355 နှင့် 09-794069355 သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိူင်ပါသည်။
Mandalay ICT Park ၏ ရုံးခန်းများ ဌားရမ်းခြင်း oန်ဆောင်မှု
By Mandalay ICT | March 5, 2018 | 0
Mandalay ICT Park သည် မန္တလေးမြို့၏ အချက်အချာကျသော နေရာတွင် တည်ရှိပါသည်။ Mandalay ICT Park နှင့် မနီးမဝေးတွင် ဘူတာကြီး၊ Diamond Plaza၊ Skywalk၊ ရတနာပုံဈေး၊ ဟိုတယ်များနှင့် ဘဏ်ပေါင်းစုံ တည်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ကျယ်ဝန်းပြီး နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ ရုံးခန်းနေရာများကို အင်တာနက် နှင့် အခြား ကောင်းမွန်သော ၀န်ဆောင်မှုများနှင့် ပံ့ပိုးဖြည့်ဆည်းပေးထားပါသည်။ ဈေးနှုန်းသင့်တင့်မျှတပြီး အစစအရာရာ အဆင်ပြေသည့်အတွက် ဌားရမ်းလုပ်ကိုင်သင့်သော နေရာလည်းဖြစ်ပါသည်။ စိတ်ဝင်စား၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို့လည်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိူင်ပါသည်။ Tel : (+95) 02-69355, 09-794069355, 09-783669355 E-mail : manager@mandalayict.com, operation@mandalayict.com www.facebook.com/mandalayict/
Mandalay ICT Park တွင် ရုံးခန်းနေရာများ ဌားရမ်းခြင်း oန်ဆောင်မှု
By Mandalay ICT | June 9, 2017 | 1
Mandalay ICT Park သည် မန္တလေးမြို့၏ အချက်အချာကျသော နေရာတွင် တည်ရှိပါသည်။ Mandalay ICT Park နှင့် မနီးမဝေးတွင် ဘူတာကြီး၊ Diamond Plaza၊ Skywalk၊ ရတနာပုံဈေး၊ ဟိုတယ်များနှင့် ဘဏ်ပေါင်းစုံတည်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ကျယ်ဝန်းပြီး နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ ရုံးခန်းနေရာများကို အင်တာနက် နှင့် အခြား ကောင်းမွန်သော ၀န်ဆောင်မှုများ ပံ့ပိုးဖြည့်ဆည်းပေးထားပါသည်။ ဈေးနှုန်းသင့်တင့်မျှတပြီး အစစအရာရာ အဆင်ပြေသည့်အတွက် ဌားရမ်းလုပ်ကိုင်သင့်သော နေရာလည်းဖြစ်ပါသည်။
Mandalay ICT Park ၏ ခန်းမ ဌားရမ်းခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများ
By Mandalay ICT | May 11, 2017 | 0
လူကြီးမင်းတို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် Seminar, Workshop, Job fair, Training, Meeting အစရှိသည့် ပွဲများကို Mandalay ICT Park တွင် သက်သာသောနှုန်းထား၊ ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုများနှင့် လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျ ကျင်းပပြုလုပ်နိူင်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို့လည်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိူင်ပါသည်။ Tel : (+95) 02-69355, 09-794069355, 09-783669355 E-mail : manager@mandalayict.com, operation@mandalayict.com www.facebook.com/mandalayict/
nan on Mandalay ICT Park တွင် ရုံးခန်းနေရာများ ဌားရမ်းခြင်း oန်ဆောင်မှု
Gaz Salahuddin on Our Founders
3rd floor, Yadanarbon Super Center, Conor of 34th and 78th street, Mandalay.
© Copyright 2017 Mandalay ICT Park. All rights reserved.
Call Us! +95-9-783669355 operation@mandalayict.com